Aragtiyada kala duwan ee doorashada ZImbabwe - BBC News Somali
Aragtiyada kala duwan ee doorashada ZImbabwe
2 Agoosto 2013
Kormeerayaasha ka socda dalalka gobolada Africada koonfureed ee SADC, ayaa ku dhiirigaliyay laba xisbi ee ku tartamay doorashada dalka Zimbabwe in ay xushmeeyaan natiijada, iyadoo ay soo baxayaan sheegashooyin isburinaya oo ka soo yeeraya xisbiga madaxwaynaha iyo kan mucaaradka Morgan Tsvangirai.
Mid ka mid ah kormeerayaasha sare ee doorashada ah, Bernard Membe, ayaa saxaafadda u sheegay in SADC ay u aragto doorashada mid u dhacday si xor ah balse aan cadaalad ahayn. Waxaa uu sheegay in aysan goor hore ugu dhawaaqin arrintan maadaama ay deg deg ahayd.
Madaxa kooxda Midowga Africa, Olusegun Obasanjo, ayaa ku tilmaamay doorashada mid ku dhacday si xor ah, cadaalad ah macquulna ah.
Hase yeeshee, warka ka soo baxay AU ayaa sidoo kale walwal ka muujiyay daabacaadda in ka badan laba million oo waraaqaha codbixinta oo dheeraad ah, dib u celinta codbixayayaasha soo xaadiray goobaha codbixinta qaar iyo dhibaatooyin kale.
Natiijada hordhaca ah ayaa muujinaysa in uu si xoog leh u hogaaminaya xisbiga madawaynaha ZANU-PF, balse Mr Tsvangirai ayaa ku tilmaamay codbixinta mid lagu maadaysto.